Fikarohana momba ny firaisana Tantaram-pinoana Reincarnation Child of Alessandrina Samona 1 sy 2 - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Fomba fiaina: Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha tamin'ny fahazazany, Fanahy Tari-dalana, Fitoviana amin'ny fisehoan-javatra sy ny fihetsika
Mpikaroka: Carmelo Samona, MD
From: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, by Ian Stevenson, MD
Article amin'ny Walter Semkiw, MD avy amin'ny Teraka indray: tranga tany am-boalohany nateraky ny porofo momba ny fiainana taloha miaraka amin'ny raharaha Xenoglossy notadiavin'i Ian Stevenson
Matin'ny meningitis i Alessandrina
Camelo Samona dia dokotera mpitsabo tao Palermo, Italie, izay namoaka ny tatitra momba ny raharaha momba ny fanambadiana indray ao amin'ny 1911 mikasika ny zananivavy Alessandrina. Ny anaran'ny vadin'i Carmelo dia i Adele ary ankoatra ny zanany vavy dia nanana zanaka telo izy ireo.
Alessandrina dia nitarika ny meningitis tamin'ny taona 5 ary maty tamin'ny March 15, 1910.
Avy amin'ny Fanahy Masina, Alessandrina dia mifampizara amin'ny nofy
Telo andro taorian'ny fahafatesan'i Alessandrina, ny reniny, Adele, dia nanonofy momba ny zanany vavy efa maty izay nilaza.
"Ry reniko, aza mitomany, tsy namela anao aho, fa nisintona fotsiny. Jereo! Ho lasa kely tahaka izao aho. "Tamin'io nofy io, dia nanao fihetsika i Alessandria mba hanondroana ny haben'ny zazakely. Hoy izy avy eo, "Tsy maintsy hijaly ho ahy ianao." (1)
Amin'ny maha-Fanahy, Alessandrina dia miantso amin'ny varavarana
Telo andro taty aoriana dia nanana ny nofiny i Adele. Andro vitsivitsy taorian'ireny nofinofy ireny, dia nahare feon-kira telo teo am-baravarany i Camelo sy i Adele. Ireo zanany telo lahy koa dia nandre ny feony. Nanokatra ny varavarana ny fianakaviana, saingy tsy nisy olona tao.
Tamin'ny April 10, 1910, latsaky ny iray volana taorian'ny nahafatesan'i Alessandrina, nahafantatra i Adele fa bevohoka izy. Noho ny nofy sy ny fiantsoana teo am-baravarankely, nanapa-kevitra ny handray anjara amin'ny sehatra i Camelo sy Adele, nanantena ny hahatakatra bebe kokoa ny zava-mitranga.
Alessandrina Miresaka amin'ny tontolo ara-panahy
Tamin'ny volana Mey 4, 1910, Camelo ary Adele dia nandray anjara tamin'ny sehatra media medium. Anatin'ireny fotoam-pivoriana ireny, ny fampahalalam-baovao dia hanome fanazavana amin'ny olona maty, fanahy any amin'ny tontolon'ny fanahy, ho an'ireo olona nandray anjara tamin'ny sehatra. Matetika ireo havana maty avy amin'ny mpandray anjara no hampita amin'ny alalan'olon-tsotra.
Nirotsaka an-tsehatra i Alessandrina ary nilaza fa navoakany teo am-baravarana ilay izy teo mba hisarihana ny saina. Nilaza tamin'ny ray aman-dreniny izy fa ho avy izy ary ho teraka alohan'ny Krismasy. Nilaza izy fa tena mitovy amin'ny teo aloha izy. Naverimberiny nilaza fa tiany ny fianakaviany sy ny namany rehetra hahafantatra fa hiverina izy. Nilaza izany i Alessandrina fa imbetsaka i Carmelo no nahita izany.
Tao anatin'ireo tebiteby, dia nilazalaza ihany koa i Adele sy i Camelo fa ny fanahy faharoa dia manodidina azy ireo ary izany dia ho teraka miaraka amin'i Alessandrina. Raha lazaina amin'ny teny hafa, mety hanana kambana i Adele.
Tamin'ny alalàn'ny fampahalalam-baovao dia nilaza tamin'i Adele sy Camelo ihany koa i Alessandrina fa taorian'ny volana fahatelo-n'ny vehivavy bevohoka, i Alessandrina dia tsy afaka nifampiresaka tamin'ny sehatra satria izy dia mifandray kokoa amin'ny raharaha ary vokatr'izany, dia hatory.
Tanteraka ireo faminaniana & teraka ao amin'ny vatana vaovao miaraka amin'ny endrika ara-batana
Tamin'ny volana aogositra 1910, nisy dokotera iray nanapa-kevitra fa tena bevohoka i Adele tamin'ny kambana. Tamin'ny novambra 22, 1910, zazavavy roa no teraka. Adele sy Camelo dia nahatsapa avy hatrany fa ny iray tamin'ireo zazavavy dia nitovy endrika amin'i Alessandrina. Noho ny fitoviana ara-batana, antsoina ihany koa antsoina hoe Alessavavy izy ireo, izay ho antsointsika hoe Alessandrina 2. Nantsoin'izy ireo hoe Maria zanakavavin'i Fraterna hafa. Hiresaka momba ny zanakavavy efa maty i Alessandrina 1.
Adele sy Camelo dia nanamarika ny fitoviana sy ny fihetsika teo amin'i Alessandrina 1 sy 2, izay mifanohitra amin'ny endrika sy fitondran-tenan'i Maria. Raha ireo zazavavy izay naharitra roa taona sy tapany, dia namoaka tatitra i Camelo manamarika ireo fitoviana sy fahasamihafana ireo. Anisan'izany ireto manaraka ireto.
Alessandrina 1 & 2 dia manana ireo toetra mampiavaka ny vatana vaovao sy ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao hafa ao amin'ny Phobias an'ny tabataba mafy sy barika
Tamin'ny nahaterahany dia samy nalemy ny masony havia teo amin'ny masony havia ny Alessandrina 1 sy 2, ny akorandriaka antsoina hoe seborrhea ao ambadiky ny sofina havanana sy ny tsy fahampian-tsakafo. Tsy nanana ireo toetra ireo i Maria.
Ho an'ny zazakely, Alessandrina 1 sy 2 dia sady nangina ary tia mipetraka mangina ao am-pofoany. Tsy tiany ny milalao kilalao, fa tiany kosa ny milalao miaraka amin'ny ankizy hafa. Tsy nitebiteby i Maria, ary tiany ho irery, nilalao tamin'ny kilalao.
Alessandrina 1 sy 2 dia nananihan-dresaky ny feon-java-maneno sy ny mpitaingin-tsoavaly, ary samy tsy faly izy ireo. Tian'izy ireo ny manamboatra sy manadio ny akanjo sy lamba, toy ny lamba sy lamba famaohana. Tian'izy ireo ny milalao kiraro ary napetraka ny kiraro lehibe. Tsy nanan-kery na rongony i Maria, ary tiany ny saka. Tsy tiany ny hametaka lamba na hilalao amin'ny kiraro.
Alessandrina 1 sy 2 dia niresaka tamin'ny olona fahatelo. Rehefa natahotra ry zareo dia niteny hoe: "Matahotra i Alessandrina. (2) Tiany koa ny mamorona anaran'ny biby. Ohatra, i Cateria dia lasa Caterana. (3). Samy navela hody izy ireo, lasa liana tamin'ny raharaha ara-panahy, saingy nialany ny raharaha tao an-trano.
Ny Maria kosa dia tsy niteny tamin'ny olona fahatelo, fa tsy nanova anarana, dia nomena azy (toy ireo fianakaviana hafa rehetra) ary tsy liana tamin'ny raharaha ara-panahy, fa izy kosa nanao toy ny trano.
Ny sary dia manamafy ny famerenana amin'ny laoniny ny vatana vaovao Alessandrina 1 & 2
Ao amin'ny tatitra nataony dia namoaka sary mampifandray an'i Alessandrina 1 fony izy efa ho 4 taona ho an'i Alessandrina 2 sy Maria raha toa ka 2 taona ireo kambana. Ny sary dia naneho fa i Alessandrina 1 sy 2 dia samy manana ny endrika asymmetry mitovy, satria ny maso eo ankavia dia manakaiky kokoa ny midi-maso noho ny tsara. Ny fihodinan'ny hodi-maso dia mitovy amin'ny asymmetrika. Nieritreritra i Adele fa amin'ny endriny ara-batana, Alessandro 2 dia mifanandrify amin'i Alessandrina 1 "tanteraka," afa-tsy ny hoe ny 1 dia maivana kokoa amin'ny endrika. (4)
Alessandrina 2 dia mahatadidy ny fitsidihana taloha nataon'ny Alessandrina 1 tany am-piangonana tao Monreale sy ireo pretra izay mena mena
Camelo dia nitatitra ihany koa ny fahatsiarovana ny fiainana taloha izay niainan'i Alessandrina 2 fony izy 8 na 9 taona. Camelo sy Adele nanolo-tena ny zanany fa hanao fitsangatsanganana any an-tanànan'i Monreale, izay toerana handehanany mankany amin'ny fiangonana normande Norman ao amin'io tanàna io. Hoy i Adele tamin'ireo zanany vavy:
"Rehefa mankany Monreale ianao, dia hahita zavatra sasantsasany mbola tsy hitanao teo aloha."
Namaly i Alessandrina 2 avy eo:
"Saingy ry Mama, fantatro ny Monreale. Efa nahita izany aho. "(5)
Nolazain'i Adele avy eo tamin'ny zanany vavy fa tsy mbola tany Monreale mihitsy izy. Alessandriana 2 avy eo nanao fihetsiketsehana:
"Eny Manana aho. Efa teo aho. Moa tsy tsaroanao ve fa misy fiangonana lehibe any ary misy lehilahy goavam-be eny ambony tafo miaraka amin'ny sandriny? Ary tsy tsaroanao ve ny fomba nandehananay niaraka tamin'ny ramatoa iray izay nanana tandroka, ary nihaona tamin'ireo pretra madinika izay nitondra mena? "(6)
Adele sy Camelo dia gaga tamin'ny valintenin'ilay zanany. Tsy nahatsiaro azy ireo hatramin'izay niresaka taminy momba an'i Monreale izy ireo ary dia gaga noho ny fijeriny amin'ny vehivavy iray nanana tandroka.
Adele tamin'izany dia nahatsiaro fa volana vitsivitsy talohan'ny nahafatesan'i Alessandriana 1, nentina tany Monreale izy ireo mba hijery ny fiangonana tao. Tamin'ity diany ity, dia naka namana vavy izy ireo izay nanana toe-pahasalamana izay nahitana lozam-pifazana malaza, mipoitra tampoka na kiraro eo amin'ny handrina, izay mety ho entin'ny ankizy ho toy ny tandroka.
Nahatsiaro ihany koa i Adele fa rehefa niditra tao am-piangonana izy ireo, dia nihaona tamin'ireo pretra ortodoksa izay nanao akanjo manga voahodina mena. Adele sy Camelo koa dia nahatsiaro fa i Alessandrina 1 dia nanamarika ilay vehivavy manana ny toetany eo amin'ny handriny sy ireo pretra hitany tany am-piangonana.
Zava-mahadomelina ve izany?
Ny fitoviana amin'ny fisehoana ivelany sy ny fihetsika eo amin'ny Alessandrina 1 sy 2 dia azo hazavaina amin'ny genetika, raha teraka avy amin'ireo ray aman-dreny ihany izy ireo.
Ny antony iray manohana an'io fitoviana io dia mifandray amin'ny fitsanganana indray ao amin'ny vatana vaovao, dia ny fitandremana ny tari-dalan'ny fanahy. Adele dia nanonofy fa ny Alessandrina 1 dia nilaza fa ho teraka amin'i Adele. Ankoatra izany dia nandray anjara tamin'ny fisamborana i Alessandra 1 ary nilaza fa ho teraka miaraka amin'ny kambana, izay tanteraka.
Ny fizaram-potoana fobiasan'ny mpanenona sy ny feo mafy dia manohana an'i Alessandrina 2 ho zafindrafatahan'i Alessandrina 1.
Ny tena zava-dehibe, i Alessandrina 2 dia nahatsiaro ny fitsidihan'ny fiangonana tao Monreale, ny vehivavy nanana tandroka teo amin'ny handriny ary ireo mòno amin'ny akanjo mena, izay mifanaraka amin'ny zava-nitranga rehetra nitranga teo amin'ny fiainan'i Alessandrina 1.
Endrika ivelany dia mitovitovy amin'ny iray ihany no tafiditra ao amin'ny iray hafa.
Karazana toetra mitoetra tsy miova. Ho an'ny zazakely, Alessandrina 1 sy 2 dia sady nangina ary tia mipetraka mangina ao am-pofoany. Tsy tiany ny milalao kilalao, fa tiany kosa ny milalao miaraka amin'ny ankizy hafa. Samy tsy nankasitraka azy ireo ny ankamaroany, tiany ny nanamboatra akanjo sy lamba malefaka, toy ny lamban-tsoavaly sy lamba famaohana, ary tia milalao kiraro izy ireo ary nametraka kitapo lehibe. Alessandrina 1 sy 2 dia niresaka tamin'ny olona fahatelo. Tiany koa ny mamorona anaran-tsakafo. Maria, anabavin'i Alessandrina 2, dia tsy nizara ireo toetra ireo.
Phobia avy amin'ny fiainana taloha: Ity tranga ity dia mampiseho fa ny phobia dia afaka misisika hatrany amin'ny fampodiana iray hafa, satria ny Alessandrina 1 sy 2 dia samy manana phobias amin'ny horakoraka mafy sy ny mpanenona.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Ity tranga ity dia mampiseho fa ny fanahy dia afaka hiverina indray amin'ny fianakaviana iray ihany.
Ny Fanahy Mitarika: Alessandrina 1 dia afaka naminavina avy amin'ny tontolon'ny fanahy, tamin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao, tamin'ny nahaterahany niaraka tamin'ny rahavavy kambana talohan'ny Krismasy, izay nitranga.
Araka ny voalazan'i Alessandrina 1, taorian'ny telo volana nateraky ny fitondrana vohoka, dia lasa mifandray akaiky kokoa amin'ny fiaramanidina ara-batana ny fanahy, raha toa ka lasa sarotra kokoa ny fifandraisana eo amin'ny fanahy sy ny olona, ​​amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao. Raha fintinina dia lasa mifamatotra bebe kokoa amin'ny foetus ny fanahy amin'ny telo volana amin'ny maha-bevohoka azy.
Ny fihenam-bidy: Raha heverina fa tafiditra ao anatin'ny foetus ny fanahy hatramin'ny fotoam-panatanterahana, dia miteraka tranga maromaro izany, satria i Alessandrina 2 dia teraka 8 volana taorian'ny nahafatesan'i Alessandrina 1. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fanahin'ny Alessandrinas dia efa tafiditra tamin'ny zandrin'i Alessandrina 2, raha mbola velona kosa i Alessandrina 1.
Ity karazana tranga fampidiran-doko ity, izay misy fanahy iray tafiditra amin'ny fitondrana vohoka ary mampiditra olona velona amin'ny fotoana iray, dia hita ihany koa ao amin'ny Hanan Monsour | Suzanne Ghanem raharaha momba ny harerahana, izay notadiavin'i Ian Stevenson, MD.
1. Stevenson, Ian: tranga eropeana amin'ny karazana fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, McFarland & Co, 2002, pejy 24
2. Stevenson, Ian: tranga eropeana amin'ny karazana fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, McFarland & Co, 2002, pejy 24
3. Stevenson, Ian: tranga eropeana amin'ny karazana fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, McFarland & Co, 2002, pejy 25
4. Stevenson, Ian: tranga eropeana amin'ny karazana fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, McFarland & Co, 2002, pejy 25
5. Stevenson, Ian: tranga eropeana amin'ny karazana fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, McFarland & Co, 2002, pejy 26
6. Stevenson, Ian: tranga eropeana amin'ny karazana fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, McFarland & Co, 2002, pejy 26